MACLUUMAADKA NOOCA EEYGA EE SHIINAHA LOO XIRAY IYO SAWIRO - EEYAHA
Macluumaadka Nooca Eeyga ee Shiinaha loo Xiray iyo Sawiro
(Timo la'aan iyo Powderpuff)
'Kuwani waa labadayda Shiine ee Shiinaha, Preston (timo la'aan) iyo Baxter (budada). Waxay ahaayeen dad qashin qubka ah waxayna ku jiraan 18 bilood sawirka. Eeyo aad u edeb badan, oo caruur weyn leh oo labaduba jecel banaanka si la yaab leh kuleylka Texas. '
Liistada eeyaha Shiinaha ee loo yaqaan 'Mix Crested Mix Breed Dogs'
Waxaa jira laba nooc oo kala duwan oo ah Eyga Shiinaha loo yaqaan 'Crested Dog', 'timo la'aan' iyo 'budada'. Noocyada aan timaha lahayn waa intaas oo keliya: timo la'aan, marka laga reebo cagihiisa, madaxa iyo dabada. 'Powderpuff' wuxuu leeyahay jaakad dheer oo jilicsan. Qaar ka mid ah kuwa wax soo saara ilaa maantadan la joogo 'baaldi,' sida ay ugu yeeraan, budada marka ay dhashaan, sababtoo ah waxay ku andacoodaan inaysan qiimo badan lahayn. Markuu adeegto 'baaldiyo' eey ey macnaheedu yahay waxay ku ridayaan baaldi biyo ah markii ugu horreysay ee uu dhalo oo ha u dhinto. Noocyada kala duwan ee budada ah waa eey qurux badan oo leh jaakad buuxda oo dhogor ah dad badanina ma oga in ay jiraan sababtoo ah degello badan oo internet ah oo keliya ayaa muujinaya noocyada aan timaha lahayn. Labada noocba si isku mid ah ayey u aqoonsan yihiin naadiyada waaweyn ee aqalku.
Maqaarka iyo jaakaddu waxay noqon karaan midab kasta, oo adag, isku qasan ama dhibco leh dhammaantood. Labada nooc ee timo la'aanta ah iyo kuwa budada ah waxay ku dhalan karaan isla qashin. Madaxa Shiinaha ee loo yaqaan 'Crested' waa mid qaab-qaabeed u eg marka laga eego xagga sare iyo dhinaca. Xuubka afku wuxuu leeyahay joogsi yar, oo si fiican ayuu ugu taabanayaa dhabannada. Midabka sanku wuxuu noqon karaa mugdi ilaa iftiin, waxay kuxirantahay maqaarka iyo midabka jaakada. Indhaha u eg yicibta iyo cirifka indhaha waxay yeelan doonaan midab u dhigma midabka eyga. Dhagaha waaweyni ma gooyaan oo way taagnaadaan. Waxaa laga yaabaa in la tirtiro
feeryahan iyo isku dhafka adhijirka Jarmalka
Kuwa ugu caansan ee timaha bilaa timaha ah, Shiineyska Crested wali waa dhif iyo naadir. Eeyahaani waa kuwo feejigan, soo jiidasho leh, dhaq dhaqaaqaya oo jecel. In kasta oo kalgacal iyo ciyaar la leh carruurta, carruurta waa in la baraa in aysan ku adkaysan noocyadan maadaama ay saaxiibtinimo leeyihiin, laakiin ma leh timaha difaaca ee noocyada kale leeyihiin oo si fudud ugu dhaawacmi kara. Waa wehel madadaalo iyo madadaalo leh. Ha dhalaan cunuggan ama waxaad u horseedi kartaa cabsi. Si wanaagsan bulshada u dhexgeli , oo ka bilaabanaya markay yar yar yihiin, u soo bandhigida sawaxanka sare iyo dhaqdhaqaaqa banaanka. Eygan caqliga badan ayaa awood u leh inuu sameeyo tabo. Guud ahaan way ku fiican yihiin xayawaanka kale . Iyagu maahan ganacsato. Eeyaha Qabqabtay ee Shiinaha ayaa jecel inay fuulaan oo ay qodo godad. Waxay u muuqdaan inay aad ugu xiran yihiin milkiilayaashooda. Eeyahani waxay ku raaxaystaan ​​wehelnimo waxayna u baahan yihiin hoggaan joogto ah oo aadanaha Ha u oggolaan in noocaani cajiibka ahi ku dhaco ' Cudurka Dog yar 'meesha ay ka maqan yihiin a hogaamiyaha xirmada aadanaha . Way fududahay in la dhasho eey yar, si kastaba ha noqotee, sameynta tan waxay sababi kartaa dabeecado badan oo aan loo baahnayn. Haddii eeygaagu qayliyo, ilaaliyo walxaha, dillaac ama qaniinyo, eeyga ayaa loo oggolaaday inuu la wareego oo uu hoggaamiye u noqdo aadanaha. Dabeecadahaas waa la sixi karaa isla marka bini-aadamku bilaabo inuu muujiyo hoggaanka saxda ah.
Dhererka: 12 inji (30 cm)
Miisaanka: kama badna 10 rodol (4.5 kg)
Miisaanka si fudud uma badna. Maqaarka banaanka loo saaray eeyaha aan timaha lahayn ayaa u baahan daryeel gaar ah si looga hortago cuncunka maqaarka. Eeyaha aan timaha lahayn ayaa hela qoraxdu waana in la adeegsadaa shaashad qorraxeed wanaagsan haddii eeyga u baxayo qorraxda. Noocyada aan timaha lahayn waxay u nugul yihiin ilig lumid iyo suus. Powderpuffs waxay leeyihiin ilko caafimaad qaba. Noocyada aan timaha lahayn waxay leeyihiin ilkaha canine-da hore ee horay u sii jeedinaya ama 'foolka' sida loogu yeero, laakiin badanaa kuwani waa ilkaha ugu horreeya ee soo dhaca. Boqolkiiba sare ee Cresteds Shiinaha ayaa xasaasiyad ku leh dhogorta iyo lanolin. Eeyaha aan timaha lahayn iyo kuwa budada ah labaduba waxay ku dhasheen isla qashin. Ey kasta oo aan timo lahayn wuxuu qaadaa hal hiddo oo aan timo lahayn iyo hal hiddo oo timaha ah. Laba hiddo-wadaha aan timaha lahayn ayaa dilaa ah.
Ku fiican nolosha guriga. Iyagu si caddaalad ah ayey gudaha ugu firfircoon yihiin waxayna sameyn doonaan wax hagaagsan iyadoon deyr lahayn. Waa inay xirtaan funaanad qabow xilliga qabow.
isku darka adhijir Jarmal iyo feeryahan
In kasta oo ay tahay mid duufsan oo lagu xambaarayo xayawaankan jilicsan, kuwan waa eeyo yar yar oo firfircoon oo u baahan a socod maalinle ah . Cayaartu waxay daryeeli doontaa baahiyo badan oo jimicsi ah, si kastaba ha noqotee, maadaama oo dhammaan noocyada cayaaraha aysan buuxin doonin dareenkooda aasaasiga ah ee socodka. Eeyooyinka aan helin socodka maalinlaha ah waxay u badan tahay inay soo bandhigaan dhibaatooyin badan oo xagga dhaqanka ah. Waxay sidoo kale ku raaxeysan doonaan rooti wanaagsan meel aamin ah oo furan oo ka baxsan leedhka, sida daarad weyn oo ood leh. Ha u maleynin in maadaama oo uu yar yahay ay tahay in lagu koobo meel yar.
Qiyaastii 2 ilaa 6 eey
Shiinaha 'Cresteds' waa mid aad u nadiif ah, oo aan lahayn ur eyga. Powderpuffs waxay u baahan yihiin qurxin badan. Caddaynta maalin kasta ee budada budada dheer, ganaax, jaakad laba jibbaaran ayaa lagula talinayaa, iyadoo taxaddar dheeraad ah la yeelanayo marka eygu daadiyo. Koodhka dhogorta ee dhogorta leh ayaa noqda mid miro dhal ah haddii la dayaco. Si joogto ah u maydh timo la'aanta oo ku duug saliid yar ama kareem maqaarka si aad u jilciso. Eeyadan ayaa wax yar u daadiya timo la'aan waxayna u fiican yihiin dadka xasaasiyadda ku dhaca. Noocyada aan timaha lahayn uma nugul boodada. Waxay ku dhici karaan shilinta sida dadka oo kale, laakiin way fududahay in la arko.
saddex midab leh oo ingiriis ah springer spaniel
Shixnadaha Shiinaha ayaa asal ahaan ka soo jeeda Afrika halkaasoo loogu yeeri jiray 'Jiilalka Timo la'aanta Afrika'. Maraakiibta ganacsiga ee Shiinaha waxay istaageen hareeraha xeebaha Afrika iyagoo maraya dariiqyadooda waxayna keeneen eeyaha dushiisa maraakiibtooda si ay ugaarsadaan xayawaanka Waxay u bixiyeen eeyaha 'Shiine Crested' oo magaca ayaa ku dhegan. Baadido qadiim ah Qabiilooyinka Mareykanka Asalka ah (Aztec) waxay u haysteen inay ahaadaan kuwa kululeeyayaasha sariirta sidoo kalena cuna. Laba Cresteds oo Shiineys ah ayaa markii ugu horreysay lagu soo bandhigay 1885 Bandhigii Westminster Kennel Club ee magaalada New York. Si kastaba ha noqotee 1965, sababtoo ah la'aanta koox qaran oo taageerta taranka iyo tirooyinka eeyaha oo aad u yar, AKC ayaa hoos u dhigay u-qalmitaankooda in la muujiyo. Naadigii ugu horreeyay ee Mareykan ah waxaa la aasaasay 1979-kii waxaana aqoonsaday AKC 1991-kii. Weeraryahanka Gypsy Rose Lee wuxuu adeegsan jiray Shiinaha Crested. Shiinaha Crested waxaa badanaa lagu muujiyaa bandhigyo ey yar oo naadir ah.
Koonfurta, Ciyaaraha AKC
Louie Shiine Crested Powderpuff wuxuu jiray 7 bilood
Gracie eeyga Crested Powderpuff
Wilbur Shiine Crested Powderpuff wuxuu jiray 3 sano
Eey u dhashay Shiinaha oo loo yaqaan 'Harry Crested' ayaa loo magacaabay Harry 13 toddobaad
jiir terrier iyo chihuahua mix
Faiter Samuraj aka Pixie Shiine Crested dhammaantood wuu koray
Jewel's Simply Irresistible at Hpnotik, aka Sisko eeyga Crested ee Shiinaha sida eey ee toddobaadyada 12- 'Sisko waa shukulaato aan timo shukulaato lahayn oo loo yaqaan' Crested Crested '. Dhegihiisa ayuu ku duubay sawirka si uu uga caawiyo inay istaagaan! '
La soo dhoofiyey Horyaalka Jabbaan / Mareykan Vanitonia Daanyeer Ganacsi AOM / SOM ugu sarreysa 2011-2012 — sawir xushmad leh Jewels Shiinaha Crested
'Shelby waa 6-lb., 11-bilood jir Shiine ah oo laga soo qabtay Massachusetts. Waxay jeceshahay carruurta iyo bisadaha! Saaxiibkeeda ugu fiican waa a Brussels Griffon ayaa loo magacaabay Zao waa lamaanayaasha ugu yaabka badan ee aad waligaa aragtay!
Porky at BoulderCrest Ranch ee Shiinaha Crested Powderpuff eey 5 bilood jir ah— 'Porky, sida aan kalgacal ugu yeerno, wuxuu jecel yahay inuu wax cuno. Isagu waa rajada muujinta ugu sareysa. Sire / biyo xireenkiisa labaduba waa horyaal. Wuxuu leeyahay dhaqdhaqaaq iyo jaakad uu ku dhinto. Aad baa loo jecel yahay oo loo jecel yahay. Sawir iska leh BoulderCrest Ranch, oo ah soosaaraha gaarka ah ee tayada sare leh ee Powderpuffs
Nin Sharp Labisan 'Tux' Eyga Budhcad Badeedka Shiinaha Lagu Xidho 4 bilood jir ah— 'Tux waxaa si kalgacal leh u leh Jodi Florida.' Sawir iska leh BoulderCrest Ranch, oo ah soosaaraha gaarka ah ee tayada sare leh ee Powderpuffs
Eeg tusaalooyin dheeraad ah oo ku saabsan Shiinaha Crested
Sawirada Qabashada Shiinaha
Sawirada Qabashada Shiinaha 3
Sawirada Qabashada Shiinaha 4
Sawirada Qabashada Shiinaha 6
Sawirada Qabashada Shiinaha 7
Sawirada Qabashada Shiinaha 8
Noocyada Timo la'aanta ah
cawl iyo caddaan yar oo schnauzer
bakoorad corso mastiff Talyaaniga iyo isku dhafka pitbull
Guinea cusub dari eey gabay
chihuahua feer isku darka buuxa koray